Sajhasabal.com | Homeयी पाँच कारणले कहिले पनि विवाह गर्नुहुँदैन, के-के हुन् पाँच कारण ? जान्नुहोस
यी पाँच कारणले कहिले पनि विवाह गर्नुहुँदैन, के-के हुन् पाँच कारण ? जान्नुहोस
कसै न कसैको दबाबमा अधिकांश किशोर किशोरीहरुको विवाह छिट्टै हुने गर्दछ, उनीहरुले विवाह आफ्नो खुशीले गरेका हुँदैनन् । अनि पछि गएर पछुताउँछन् । तपाईं पनि यस्तै बाध्यतामा परेर विवाह गर्दै हुनुहुन्छ भने यी कारणहरुबाट प्रभावित भई विवाहको हतार नगर्नु होला
परिवारको दबाव-प्राय: अधिकांश परिवारका सदस्यहरुले अब त विवाह गर्नुपर्छ भन्दै दबाव दिन्छन् । आमा–बुवाको दवावका कारण छोरीहरु पनि विवाहका लागि सहजै तयार हुन्छन् । तरु त्यस्ता धेरै कुराहरु हुन सक्छन् जसबाट तपाईंलाई बिहेपछि पश्चाताप भैरहेको हुन्छ ।
आफन्तको दबाव- आमा–बुवाले कहिलेकाहीँ कुरा बुझिसकेका हुन्छन्, तर केही आफन्तहरु त्यस्ता पनि हुन्छन्, जसले युवतीका आमा–बुवामाथि दबाव दिइरहन्छन् । ती आफन्तहरुले ‘केटा अत्यन्त राम्रो छ, छोरीको विवाह उसैसँग बिहे गरिदिनुपर्छ, यो भन्दा राम्रो परिवार पाइँदैन भन्दै दबाव दिन थाल्छन् । यदि तपाईंको परिवारमा पनि कुनै आफन्तले विवाहका लागि दबाव दिइरहेका छन् भने सावधान हुनुहोला दबावमा आएर बिवाहगर्दा पछुताउनु पर्नेछ ।
बढ्दो उमेरको चिन्ता- परिवारका सदस्यहरुले ‘उमेर ढल्किन लागिसक्यो, अहिले विवाह नगरे कहिले गर्ने’ भन्दै विवाहका लागि दबाव दिन थाल्छन् । तिमीसँग कसले विवाह गर्छ ? जस्ता कुराहरु गरेर छोरीलाई विवाह गर्नका लागि बाध्य पार्ने आमा–बुवाले आजैका दिनदेखि छोरीलाई दबाव दिन रोक्नुपर्छ । जब उनीहरु विवाहका लागि तयार हुन्छन, त्यसपछि मात्रै विवाह गरिदिनु पर्छ । छोरीहरुलाई विवाहका लागि प्रशस्त सोच्न समय दिनुपर्छ ।
सम्पत्ति- आर्थिक सम्पन्नता र रहनसहन देखेर कतिपय व्यक्तिहरु विवाहका लागि तयार हुन्छन् । तर, ती व्यक्तिको व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा थाहै हुँदैन । त्यसैले विवाह गर्नुअघि हुनेवाला जीवनसाथीका बारेमा राम्ररी बुझ्नुपर्छ ।
ब्रेकअपलाई बिर्सन-कतिपय व्यक्तिहरु ब्रेकअपपछि निकै नै उदास तथा दु:खी हुन थाल्छन् । त्यस्तो बेला उनीहरुसमक्ष विवाहको प्रस्ताव आयो भने उनीहरुले त्यसलाई तत्काल स्वीकार्छन् । यसो गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु जस्तै हो । आफ्नो प्रेमलाई बिर्सन यदि तपाईंले विवाहको प्रस्ताव स्वीकार्नुभएको हो भने त्यो गल्ती नगर्नु होस् ।